घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू रोबर्ट पेरेरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले फुल स्टोरीको फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ उपनाम "एल Tucumano"। हाम्रो रोबर्टो परेरा बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने समयको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले 2018 / 2019 प्रिमियर लिग सिजनमा उनको सुरूवात सुरु बारे जान्दछ। तथापि, केवल केहि केहि रोबर्ट पेरियराको बायो को बारे मा धेरै जान्दछन् जो धेरै आकर्षक छ। अब अगाडी बढो बिना, सुरु गरौं।
रबर्टटो पेरिरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम रोबर्टो मैक्सिमिलिओ पेरेरा छ। रोबर्टो पेरियरा7जनवरी जनवरी 1991 मा उनको आमा रोसा टोलोडो र सान माइगुल डी ट्युमनममा बुबा लियोनिड्स पेरेरामा जन्मेका थिए।
उसका आमा बुबा बीचको विवाह; लिओनिड्स पेरेरा र रोजा टोलेडो शुद्ध मुस्कान र खुशीको हो। ऊ कसरी उसको बुवा जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्।
रोबर्टो पेरेराका अभिभावकहरू रोमन क्याथोलिक तहका मसीहीहरू हुन्। पेरेरा प्रकाशमा आउनु भन्दा पहिले, उनको बुबा निम्बूको रस कारखानामा काम गर्थे। त्यतिखेर, लिनिडिसले कडा परिश्रम गर्नुपर्‍यो कि उसको परिवारले दिनहुँ पाउने तलबबाट के खान पाउने थियो।
Pereyra, एक समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट धेरै खेलाडीहरू (जस्तैGerard Piqué, andrea Pirlo, ह्यूगो लेलोरी मारियो गट्ज आदि) आफ्नो शुरुआती जीवन को एक कठिन समय थियो। उहाँ आफ्ना दुई भाइहरू र एक बहिनी संग टुकुमानको चप्पलमा हुर्कनुभयो।
त्यसपछि, उनको पड़ोस सँधै यसको ओभर्रोड गरिएको प्रकृतिको लागि जान्दछ किनकि यसले अर्जेन्टिनाको उत्तर-पश्चिमी भागमा अवस्थित थियो। पेरिस र तिनका आमाबाबु एकजना काठको घरमा बसोबास गर्थे जुन सुप्रसिव थिएनन् जब सम्म उनि कंक्रीट संग निर्माण गरिएको एक अपार्टमेन्टमा लागेनन्। यो एक उन्नयन जस्तो लाग्यो जब सम्म यो स्पष्ट थियो कि उनीहरूको नयाँ आवासले दण्डको बक्सको आकार बराबर गर्दछ। कठिनाई देखेर पेरेरालाई आफ्नो तत्काल आवश्यकताहरूको लागि खानपानमा केहि अजीब कामहरू बिक्री गर्न र बेवास्ता गरेर। उसको अनुसार;
“हामीसँग केहि थिएन। म तामाको क्यान र कहिले काँही फलहरू बिक्री गर्दै थिए ताकि म स्यान्डविच किन्न सकूँ। म घाँस काट्ने माली पनि हुँ। हामी भोकले मर्दैनौं तर बुबाले न्यूनतम आवश्यकताहरू मात्र वहन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यसैले मैले थोरै आम्दानीको लागि सामानहरू बेच्नुप .्यो। ”
रबर्टटो पेरिरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-क्यारियर बिल्डअप
यद्यपि कुनै नराम्रो सुरु भएको भए, यसले उनीहरूलाई आफ्नो हृदयमा प्रिय राखेको कुरालाई अझ बढ्नदेखि रोक्न सकेन, यो हो फुटबल। जब पेरिरा फुटबल खेल्न थाले, उनले कहिल्यै बूथको स्वामित्व लिएनन्। कहिलेकाहिँ उनले बूट गरे तापनि उसले अझै पनि फुटबल विशेष अवसरका लागि फुटबल राख्ने खेल खेल्नको लागि आफ्नो न्यानोफुट प्रयोग गरिरह्यो।
सबै संघर्ष संग, पेरिरा एक यूटीए द्वारा जवान पक्ष को लागि खेलना शुरू गर्यो जो थियो अर्जेण्टिना रोड ट्रांसपोर्ट युनियन। १ At मा, उनले नेकोचियामा खेले जुन ब्युनस आयर्सको दक्षिणी भागमा थियो। उहाँमा अवलोकन गरिएको बिल्ट-अप जोसका लागि धन्यवाद, रिभर प्लेट स्काउट्सले उनीमा रुचि राख्दछ। यो क्लब मा परेरा एक मिडफिल्डर र एक बहुमुखी खेलाडी को रूप मा आफ्नो सही भूमिका पत्ता लगाए।
उनी एकदम नम्र शुरुआतबाट आएको थाहा पाएपछि, पेरेराले आफूलाई विश्वव्यापी रूपमा बजार योग्य बनाउनको लागि आफैमा सुधार गर्ने प्रयास गरे। यो रिभरप्लेटमा उनको युवा जीवनको अन्त्य भयो र क्लबको वरिष्ठ पक्षमा उसले ठूलो प्रभाव पार्न थाल्यो जसले उसलाई यूरोपको टिकट दिए। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
रबर्टटो पेरिरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-सम्बन्ध जीवन
प्रत्येक महान मानिस पछाडि, एक महिला छ। यस पटक, प्रत्येक सफल प्रिमियर लिग फुटबलरलाई, मारिया क्यारोलिनाको सुन्दर व्यक्तिको रूपमा देखाइएको एक ग्लैमरस व्याग छ, जुन उनको जीवनको प्रेमले तल चित्रित छ।
पेरिस हाल मारियालाई विवाहित छन् र दुबैको अक्टोबर 2015 वरपरको जन्म भएको थियो जो दुवै माक्सिआर पिरियर नामक एक छोरा हो।
रोबर्टो पेरेराको छोराको जन्मको आधारमा, दुबै प्रेमीहरू रिभर प्लेटमा उनको समयमा भेट भएको हुनुपर्छ, जुन उसले ठूलो बनाएको थिएन।
रबर्टटो पेरिरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-बुबा छोरा बन्धन
कसैले पनि बुबा हुन सक्छ, तर यसले एक असल मानिस जस्तै रोबर्टोलाई आफ्नो छोरालाई आमाको भूमिका खेल्न सक्छ।
रोबर्टोको लागि, यो केवल गोलको स्कोर मात्र होइन तर आफैले र उनको छोराको बीचमा मित्रता बढाउने। महान पिताको यस्तो विशेषता तल देखाइएको छ।
लेख्ने समयमा, मक्सी जूनियर पेरेरा पहिले नै बुबाको पदचिन्हमा चलिरहेका छन्। दुबै समय (घर भित्र र बाहिर) फुटबल खेल खेल्न चाहन्छन्।
रबर्टटो पेरिरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-पारिवारिक जीवन
उनका परिवारमा उनको परिवारको लागि बिना शर्त प्रेम हुनु पछाडि उनको अभिभावक थियो। तलको फोटोबाट न्याय गर्दै, रोबर्टो पेरेराले एउटा "अपनाउने अवधारणालाई साँच्चिकै बुझ्दछन्"अभिभावकीय भुक्तानी फिर्ता"दर्शन।
रोबर्टो पेरियराले आफ्नो आमाबाबुलाई सबै मायालु, हेरविचार, ध्यानबाट प्राप्त गर्दछन्, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उनीहरूको क्यारियरमा उनीहरूको सहयोगको लागि तिर्नुभएको छ।
यस दुनियामा सबैभन्दा सुन्दर कुरा उहाँको पिता, आमा, भाइ र बहिनी सबै खुसी हुनुहुन्छ र जान्छ कि उहाँ त्यो खुशीको कारण हो। उनको वेतनको ठूलो हिस्सा तिनको परिवारमा जान्छ।
रबर्टटो पेरिरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत तथ्यहरू
एक व्यक्तिगत नोट मा, Pereyra जिम्मेदार छ, अनुशासन र आत्म-नियन्त्रण छ। उनी आफ्नो परिवार र उनका अर्जेण्टीनी परम्परालाई माया गर्छन्।
पेरियरा को एक आन्तरिक राज्य को आन्तरिक राज्य हो जसले उसलाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन दुवै मा महत्वपूर्ण प्रगति प्रदान गर्दछ।
प्रशंसकहरु को सबै स्तर को अनुकूल: पेरिरा को आफ्नो प्रशंसकहरु को लागि धेरै अनुकूल मित्रहरु लाई ज्ञात गरिएको छ, अक्षम पनि। एउटा उदाहरण तल देखाइएको छ।
उनको उपनाम को बारे मा: रोबर्टो पेरियराले आफ्नो उपनाम पाए "एल Tucumano"उनको समयमा नदी प्लेट मा। यो एक नाम को नाम एक व्यक्ति को रूप मा Tucumano क्षेत्र बाट आउछ। ट्युमम्यान उत्तर पश्चिमी अर्जेन्टिनामा एक सानो प्रान्त हो। प्रेम रोबर्टोको कारणले उनको उत्थान र तिनको मान्छे ट्युमनमबाट भएको छ, तिनले नामलाई असर गर्न कोसिस गरे। यसले उनलाई TUCU शब्द समावेश गर्नका लागि उनको पहिया बनाएको छ।
उहाँको विश्वासको बारेमा: आफ्नो प्रारम्भिक जीवनमा बताए अनुसार रोबर्टो पेरियरा परिवार ईसाईयतको क्याथोलिक विश्वासको हो। तिनले क्याथोलिक आदतलाई सख्तीपूर्वक पालन गर्छन्।
उनीहरूको लक्ष्य उत्सवको बारेमा: २०१/2018/२०१ English को शुरुआत अ English्ग्रेजी प्रिमियरले रोबर्टोबाट आएको यो गोल उत्सव शैली देख्यो जुन उनले "Oro पैरा उत्सव" त्यस्को मतलब my लक्ष्य को रूप मा गोल्ड को रूप मा मनाने के लिए बड़ा.
तपाईंलाई थाँहा थियो??... वाटरफोर्ड मालिकहरू, पोोजोज परिवारले राम्ररी रोबर्ट पेरेरालाई जान्दछन् र उनीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध छ।
रबर्टटो पेरिरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-क्यारियर डरहरू
16 डिसेम्बर 2016 मा, पेरिराराले आफ्नो बायाँ टाढाको घुटनी चोट लगाएका थिए जसले उनको मेनुस्कस-कार्टिलेज (हड्डिहरु अवशोषक सदमे).
चोटले उनलाई months महिना फुटबलबाट टाढा राख्यो जसको लागी उनी आफ्नो करियर सक्यो भनेर डराउँथे। उनले पुन: प्राप्ति पछि भने;
"यो एक अत्यन्तै कठिन अवधि मानसिक रूपमा थियो"
“तपाईले फिर्ता प्राप्त गर्न चाहानु भएको जस्तो लाग्छ। तिनीहरूले तपाइँलाई छ महिना भन्छन् र तपाइँ ती छ महिनाको हरेक दिन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यसले मानसिक रूपमा तपाईलाई तल झार्दछ, तर समर्पण, शक्ति, इच्छाशक्ति, र परिवारका सदस्यहरू र राम्रो साथीहरूको समर्थनको साथ, तपाईं सुरुnelको अन्त्यमा पुग्नुहुन्छ। तपाईं यस मार्फत जानको लागि प्रबन्ध गर्नुहोस्। कठिन समयमा मलाई समर्थन गर्ने सबैलाई म आभारी छु। "
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो रोबर्टो पेर्य बचपन स्टोरी प्लस अनगिन्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यो लेखमा ठीक देखिँदैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
अब्दुलया डौकोउज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य